Khamri yar oo ka mid ah xafladahaaga: cabitaannada aalkolada ah ee jilicsan | Ragga Stylish
Cabitaannada khamriga ee fudud
Khamrigu wuxuu sun ku yahay jirkeena. Haddii aan u isticmaalno si ku-meel-gaadh ah iyo qadar yar, waxay yeelan doontaa saameyn rogaal celin ah. Laakiin Isticmaalkiisa xad-dhaaf ah wuxuu cawaaqib xumo ku yeelan karaa caafimaadkeenna.
Inaad waqti ka waqti cabto waxyeello weyn uma geysato jirkeena. Haddana halistu way yaraan doontaa marka la cabbo khamri fudud.
1 Ma jiraan cabitaanno caafimaad oo caafimaad qaba?
2 Khamriga ugu xun
3 Cabitaannada aalkolada ee dagaalka yar
3.2 Casaan iyo khamri cad
Ma jiraan cabitaanno caafimaad oo caafimaad qaba?
Runta ayaa ah in aysan jirin. Aalkoladu ma fiicna in la cabo, ha yaraado ama ha qaadato qiyaaso badan. Waxay kuxirantahay qadarka aalkolada la cabo, nooc kasta oo cabitaan khamri ah wuxuu waxyeelo u yeelan karaa caafimaadka. Gaar ahaan haddii cabitaanku uu leeyahay aalkolo heer sare ah oo lagu qaso cabitaannada sonkorta leh, kaarboonka, iwm.
Khamriga ugu xun
El xikmad waa mid ka mid ah kuwa ugu yar ee lagu taliyo.
El macaroon ama almond liqueur, waxay sidoo kale ku siin kartaa qadar sare oo kalooriyaal ah.
Anise iyo liqueurs kale ee dheef shiidka. Waa cabitaan looga mahadceliyay Isbaanishka oo leh aalkolo badan. Haddii aad si xad dhaaf ah u cabto, waxaad yeelan doontaa hunguri badan.
Cabitaanada tamarta iyo aalkolada. Isku darka kiciyeyaasha iyo cabitaanka tamarta ayaa ah mid qarxa. Waxay xitaa u horseedi kartaa sumow.
Vodka wuxuu ka mid yahay cabitaanka sharaabka leh ee isticmaalkiisu ugu waxyeelada badan yahay.
Cabitaannada aalkolada ee dagaalka yar
Cabitaankan caanka ah wuxuu leeyahay khamri casaan iyo miro sida waxyaabaha ugu muhiimsan ee ay ka kooban tahay.. Haddii si dhexdhexaad ah loo wada cuno, waxay xitaa bixin kartaa faa'iidooyin caafimaad. Khamriga cas ayaa la muujiyay inuu leeyahay antioxidants, polyphenols, iyo waxyaabo kale oo caafimaad leh oo firfircoon.
Casaan iyo khamri cad
Sidii aan soo aragnay, khamrigu way caafimaad qabaan, oo loo qaatay si dhexdhexaad ah. Hal galaas oo khamri ah maalintii ayaa lagula talinayaa, xitaa khabiirada ku takhasusay cilmiga wadnaha iyo nafaqada.
In kasta oo ay u muuqato wax lala yaabo, whiskeygu wuxuu ku yaryahay karbohaydraytyada iyo dufanka eber. Intaa waxaa dheer, waxay ka kooban tahay antioxidant loo yaqaan ellagic acid oo burburin kara unugyada kansarka. In kasta oo wax waliba jiraan, haddana isticmaalkeeda laguma talin karo heerka khamriga awgood.
Beer ayaa leh heerarka sare ee silikoon, waxaana laga yaabaa inuu ku xirnaado faa iidada caafimaadka lafaha. Waxaa sidoo kale la sheegay inay kaa caawin karto yareynta wadno qabadka, cudurada wadnaha, cudurada kalyaha, iwm.
Ilaha sawirka: Ka wanaagsan Caafimaadka
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » nololeedka » dhaqanka » Cabitaannada khamriga ee fudud
Ku dhiirrigeliso xilliga fasaxa Mr Porter iyo Nicholas Hoult
Shan shaati oo zip-up ah si aad ugu iftiimiso habeenka Kirismaska